एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा भुसाल : अन्य पदाधीकारीमा को को ? | शुभयुग
एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा भुसाल : अन्य पदाधीकारीमा को को ?
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन ७, बिहिबार (९ महिना अघि)
७ असोज,काठमाण्डौ – नेकपा (एकीकृत समावादी) पार्टीको महासचिवमा बेदुराम भुसाल र सचिवमा रामकुमारी झाक्रीलाई बनाइएको छ ।
एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा भुसाललाई महासचिव र झाँक्रीलाई सचिव बनाउने सहमति जुटेको हो । उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे, धर्मनाथ साह, जयन्ती राई र प्रमेश हमाल चयन भएका छन् भने महासचिवमा डा. बेदुराम भुसाल र उपमहासचिवमा डा. विजय पौडेल, डा. गंगालाल तुलाधर र प्रकाश ज्वाला चयन भएका छन् ।
त्यस्तै, वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल छन् । महासचिवमा मुकुन्द न्यौपाने, राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला, विजय पौडेललगायत नेताले पनि दाबी गरेका थिए । सचिवालय बैठकमा भुसाललाई नै महासचिव बनाउने सहमति जुटेको हो ।
झाँक्रीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएसँगै जगन्नाथ खतिवडा, नागेन्द्र चौधरी, केशवलाल श्रेष्ठको नाम टुंगो लागेको बताइएको छ । अब यी नामलाई जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने छ । एकीकृत समाजवादीको अन्तरिम विधानमा १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ नेता, ७ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव र ७ सचिव गरी १७ जना पदाधिकारीसहित ११५ जना पूर्ण र ३६ बैकल्पिक गरी १५१ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समावादी